Ampiasao ny iPad anao toy ny klavie misy hitsin-dàlana ho an'ny Mac / Pc misy Hotkeys | Vaovao IPhone
Ny hitsin-dàlana amin'ny keyboard dia fitambarana tena ilaina mba hitsimbinana fotoana. Rehefa fantatrao tsara izy ireo, ny fidirana amina lahasa na inona na inona dia milamina kokoa sy haingana kokoa amin'ny fampiasana ireo hitsin-dàlana ireo, indrindra raha mampiasa klavier ianao, satria tsy mila manangana ny tananao ianao, raiso ny totozy na ny trackpad anao ary karohy amin'ny menus ireo. ny safidy tadiavinao. tadiavinao. Fa mila fotoana sy fiofanana izany. Misy fampiharana ho an'ny iPad, Hotkeys, izany mamadika azy ho lasa klavier feno hitsin-dàlana azonao ampiasaina amin'ny Mac sy ny PC-nao, mba hahafahanao manadino ny mitadidy ireo keybindings hampiasaina amin'ny Photoshop, Safari na fampiharana hafa maro.
Azonao atao ny mamorona hitsin-dàlana "packs" samihafa, miaraka amina fanalahidy isan-karazany, hampiasa azy ireo amin'ny rindranasa samihafa na solosaina samihafa (iray ho an'ny Mac ary iray ho an'ny Windows, ohatra). Ary raha te hampifanaraka ny lakilen'ny bokotra rehetra ianao dia tohizo mandra-pihozongozona azy, kitiho ny "x" hamafana azy na amin'ny bokotra volomboasary eo amin'ny zoro havanana ambony hanovana azy. Ny fonosana dia misy fonosana default, fa afaka mamorona fonosana avy amin'ny rangotra ianao, izay maharitra fotoana.
Satria miasa mafy ny fanovana ny lahasa tsirairay. Voalohany, mila mahafantatra ny fitambarana fanalahidy marina ianao ho an'ny asa tsirairay, ary indraindray ny mahita ny fitambarana mety dia mety ho somary 'manahirana'. Ny marina dia ny rafitry ny kodiarana mihodina angamba tsy mety indrindra raha nomena ny isan'ny fitambarana manan-danja azo atao. Kitendry virtoaly mety ho azo ampiasaina kokoa. Aza adino fa ny fitambaran'ireo fanalahidy apetaka miaraka aminao ihany no azonao ampifandraisina, tsy misy tsindry bokotra amin'ny fotoana samihafa, na script. Ny lakile tsirairay dia azo soratana satria mampatsiahy anao tsara ny asany izy io. Eto isika dia mahita teboka fanatsarana hafa, satria angamba ny fahazoana mamorona sary masina amin'ny fampiasa sasany dia ho hita maso kokoa noho ny famakiana ny mari-pamantarana tsirairay.
Na eo aza ireo lesoka kely roa ireo, dia mbola misy ihany fampiharana tena azo ampiharina, ary maimaim-poana koa izany. Mila misintona fampiharana ho an'ny iPad ianao, ary iray hafa ho an'ny Mac sy Windows. Ireo an'ny Mac sy iOS dia azo sintonina avy amin'ny magazay fampiharana azy ireo, ilay Windows iray, avy amin'ny pejiny ofisialy.
Fanazavana fanampiny - Fetsy tsotra enina ho an'ny Safari
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ampiasao ny iPad anao toy ny klavie misy hitsin-dàlana ho an'ny Mac / Pc misy Hotkeys
DismissMyKeyboard - Afeno mora foana ny fitendry (Cydia)
Casetagram dia mandefa fonony manokana vaovao ho an'ny Andron'ny mpifankatia